Yayingumfazi owakha ithala leencwadi lokuqala lehlabathi | Uncwadi lwangoku
Yayingumfazi owakha ithala leencwadi lokuqala emhlabeni
Nangona wonke umntu esazi ukuba ilayibrari yokuqala eyenziweyo yayiku IAlexandria ngenkulungwane yesi-XNUMX BCUbusazi ukuba yayingumfazi owakha ithala leencwadi lokuqala phantse kwiminyaka eliwaka kamva? Ewe, yayingumfazi ongumSilamsi, ngakumbi, UFatima Al-Fihri, owayesebenzisa lonke icandelo lakhe kwilifa likayise (wayengumrhwebi osisityebi kakhulu kwaye obalulekileyo kule ndawo) ukwenza iziko lolwazi elipheleleyo eligcina ithala leencwadi, iyunivesithi kunye ne-mosque, konke endaweni enye.
Kwenzekile kwi AD 854 kwaye ngoku ibuyisiwe ngu Umyili wezakhiwo uAziza Chaouni. Ngokomyili wezakhiwo ngokwakhe, uFátima Al-Fihri waqhekeka kunye ne-macho kunye nefashoni yakudala ngelo xesha: Umfazi wenkulungwane ye-XNUMX ulifumana njani eli xabiso lemali, anikele ngalo kwaye achithe nenxalenye enkulu yobomi bakhe esongamela ukwakhiwa kwelo ziko lolwazi?
UFatima Al-Fihri, xa wayecwangcisa olu lwakhiwo lukhulu kunye nenkcubeko, wayengazi ukuba esi sakhiwo sibaluleke kuphela eMorocco, kodwa iya kuba kukuhamba phambili kwayo yonke into EMbindi Mpuma.
Umyili wezakhiwo u-Aziza Chaouni, kunye nobuzwe obubini baseMorocco-Canada, waqala ukubuyisela eli thala leencwadi ngo-2012, apho izinto ezininzi zimdibanisayo: utatomkhulu wakhe wafunda kwithala leencwadi, wakhulela edolophini de wayeneminyaka eli-18, kodwa khange ikwazi ukungena kuye kuba yayingavulelekanga eluntwini.
Yatsho ithala leencwadi namhlanje igcina ngaphezulu kweencwadi ezingama-4000, ukuba uninzi lwazo iminyaka eyi-1200. Enye ye "anecdotes" yeprojekthi yokubuyiselwa kukuba uyilo kuye kwafuneka lujongane nokuninzi izimvo zesini kuba bekungaqondakali ukuba babengamkhethi njani umyili wezakhiwo waseMoroccan endaweni yowasetyhini kuloo msebenzi. Ngokutsho kwakhe, eyona nto iyonwabisayo kukuba abahlali baseFez bangaya kufunda kwilayibrari, phakathi kwabo kukho unyana wakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Yayingumfazi owakha ithala leencwadi lokuqala emhlabeni
Usapho lakwaGarcía Lorca lucela ukuba imbongi ingafunwa
Khuphela iincwadi ngokusemthethweni